ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာ (သုို့) မြန်မာ့ရဲ – MoeMaKa Burmese News & Media
March 4, 2013 Aung Htet
မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၃
အမှန်တော့ အင်္ဂုလိမာလ အကြောင်း စေ့စေ့စပ်စပ် မသိရိုးအမှန်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကြားဖူးနားဝ ရှိတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
အင်္ဂုလိမာလဟာ တတ်လိုသိလိုတဲ့ လိုအင်တွေကြောင့် သဘောရိုးမမှန်တဲ့ ဆရာနဲ့တွေတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်း သွေးထွက်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မိမိကို မွေးဖွား သန့်စင်ခဲ့တဲ့ မာတာ မိခင်ကိုတောင် လိုအပ်တဲ့ လက်ညိုးဖြတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာဟာ မိမိရဲ့ လိုအင်ပြည့်ဖို့ ဆရာမိုက်ရဲ့ စကားကို အမှန်ထင်ပြီး မိုက်မဲခဲ့တာပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် အင်္ဂုလိမာလ က ဘုရားရှင်နဲ့ တွေ့လို့ ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂုလိမာလ အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ အစားထိုးမရတဲ့ မိခင်လက်ညိုး ဖြတ် ချင်ခဲ့ပေမယ့် မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တာတော့ အင်္ဂုလိမာလ အတွက် ကံကောင်းတယ်ပြောရမလား။ဒါမှ မဟုတ် ကျွတ်တန်း ၀င် ချိန်တန်လို့ ကျွတ်ခဲ့တာလား ဆိုတာတော့ညဏ်မမှီလို့ မသိကြောင်းပါဗျာ..၊
သူရဲ့ လိုအင်တွေကြောင့် ဆရာမိုက်ရဲ့ သဘောမမှန်တွေကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား မနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရလေခြင်းဆိုပြီးတော သနားစိတ်ပိုမိခဲံပါရဲ့။
နောက် မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့ တွေမှ မြတ်ဘုရးရှင်ရဲ့ အဆုံးမအကိုနာယူပြီး ရဟန်းဝတ်၊ ၀ိပဿာတရားကျင့်ပြီး ရဟန္တာအဖြစ်ရောက်အောင် အားထုတ်နိုင်သွားလို့ နိုင်လို့ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂုလိမာလ အကြောင်းတွေပြောနေရတာက ဒီကနေ့ ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေ မအူပင်ဖက်မှာ သောင်းကျန်း နေပြန်လို့ပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတွေကို ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ လို့ နာမည်တပ် မှည့်ခေါ်မယ်ဆိုရင် မှားနေမလားဗျာ။
မအူပင်ဖက်မှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ သတင်းစုံကို အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေကြတော့ ဟိုအရင်က အင်္ဂုလိမာလ လိုမဟုတ်ပါဘူး။
ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေကြတော့ ကိုယ် တတ်ချင်၊သိချင်တဲ့ လိုအင် ကြောင့် မဟုတ်ပါဘဲ ဆရာစကား(သို့) အမိန့် ကို တသွေ မသိမ်း နာခံ လုပ်ဆောင်ကြတာလေ။
သဘောရိုးမမှန်တဲ့ အမိန့်တွေကို လိုက်မလုပ်လို့ ထမင်းငတ်ရင် မင်းကျွေးမှာလား။
ငါတို့ ကလေး မင်းကျောင်းထားပေးမလား။
ငါတို့ မိန်းမ မင်းကျွေးမွေးထားမလား။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဘာတခုမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် က ဘုရားမှ မဟုတ်တာကိုး။
ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်တာကို မင်း ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စား အေးဆေးနေလို့ ပြောကြပေါ့။
ဟိုအရင်က အင်္ဂုလိမာလ ကို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘဲ အသနားပိုခဲ့ သလို ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလကို လည်း အသနားပိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟိုအရင် အင်္ဂုလိမာလ က မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေလို့ ရဟန္တာ ဖြစ်လို့ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပေမယ့် ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေကိုတော့ ပိုပြီးတောင် အသနားပိုမိပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သေချာပါတယ် ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေက မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့ တွေဖို့ အကြောင်း လုံးဝ မရှိဆိုတဲ့ အသိကြောင့်ပါ။
ငါ့မိသားစုအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဆိုတာတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါမှလည်း ဖခင်ကောင်းပီသ ပေမပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဆရာကောင်းတော့ ဆင်ခြင်သိညဏ်နဲ့ ရွေးချယ်ရမှာပါ။
ခုတော့ ခေတ်သစ် သဘောရိုးမမှန်တဲ့ ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေ အောက်မှ ခစားနေကြတော့ ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။
ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေရဲ့ လက်ဝေခံ တပည့်တွေက လည်း ထမင်းရှင် လယ်သမားတွေကို ဒီလိုရိုက် ပြီးရင် ဒီလိုပြန်ပင့်တင်
ခေါင်းတွေ့ ခေါင်းရိုက်၊ခြေထောက်တွေ့ ခြေထောက်ရိုက် ဘယ်နားရာရိုက်ပါလို့ သေချာ သရုပ်ပြပါလို့ မှာကြားလိုက်ပါရဲ့လေ။
ဟိုအရင် အင်္ဂုလိမာလ ရဲ့ ဆရာကြီးက တော့ လက်ညှိုးဘဲ ဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့။
ဒီနေခေတ်မှာတော့ ဘာလို့ မသတ်မှတ်ထားတော့ပါဘူး။အကုန်ရိုက် အကုန်ဖြတ်….ဘုရားဘုရား….၂၁ရာစုမှာ သနားကြင်နာခြင်း
ကင်းတဲ့ နှစ်တွေလို့ တင်စားရမလိုဖြစ်နေခဲ့ပါကော။
တကယ်တော့ ဟိုအရင် အင်္ဂုလိမာက ပညာတတ်လို သိလိုဇောနဲ့အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခွင့်မရှိတာပါ။
ဒီကနေ့တော့ စားဝတ်နေရေး အသက်ရှင်သန်နေရေး အတွက် အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခွင့် မရှိတော့တာပါ။
နောက်ဒီကနေ့ ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေကလည်း ဆရာစစ် ဆရာမှန် သဘောမရိုးတာ အမှန်ဆိုတာ ကို ချပြနေစရာ မလိုပါဘူး။
အင်္ဂုလိမာလ က နောက်ဆုံး လက်ညှိုး တချောင်းလိုမှ မာတာမိခင်ရဲ့ လက်ညိုးကို ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းက မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။
ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလတွေက တော့ အမေအရွယ် ဘေးက ရပ်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက်ကို ကျော်ဖြတ်သွားပြီးမှ နောက်လိုက်တွေက တွန်းထိုး ရိုက်ပြီးတဲ့ နောက် မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့ မတွေ့ဘဲ အရှူံးနဲ့ရင်ဆိုင် နောက်ဆုတ်ပြန်ပြေးကြတာများ ကြည့်လို့တောင် မကောင်းပါဘူးဗျာ။
ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေကို ချွတ်ဖို့ မြတ်ဘုရား အမြန် ပွင့်ဖို့ ဆုတောင်းပါရဲ့..။
ခေတ်သစ် ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေ ကလည်း လွန်လှပါပြီ။
သင်္ကန်းဝတ် ဘုန်းကြီးကို လည်း ရဟန်းတုလို့ ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလတွေကို သင်ကြားပေးကြ။
ဓါးမဦးခုတ် လယ်လုပ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးရှင်မမည် ရိုက်ချင်သလို ရိုက်နိုင်သည်လို့ အမိန့်ပေးကြ။
တောထဲမှာ အစိမ်းရောင်ဝတ် မြင်ရင် သူပုန်လို့ မှတ်ယူခိုင်းကြ။
စာရေး တံကူ ကိုင်တာမြင်ရင် ငါဆရာကို အသရေဖျက်မဲ့ သူလို့ ပြောဆိုထားခဲ့ကြလေပြီ။
ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဒဘာသာ မှာ အလွန်ကို ကျေးဇူးသိ သနားကြင်နာ တတ်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာတွေကို ဘဲ တွေ့ခဲ့ဖူးတော့ ခုချိန်မှာ အထူးအဆန်းကိုဖြစ်လို့ပါ။
ကိုရင်တပါးကို တွေ့ရင်တောင် အစစ် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကိုရင် စည်းထားတဲ့ သင်္ကန်းကို ဘဲ ကြည်ညိုပြီး လေးစားရမှာပါ။
အမေအရွယ် တွေ့ရင်တောင် ၀မ်းနဲ့လွယ်မွေးတဲ့ အမေ မဟုတ်ပေမယ့် အမေ အမေ ဆိုခေါ်ပြီး ၀တ်ကြိးဝတ်ငယ် ပြုစုကြတာ မဟုတ်လား။
ခုတော့ကိုယ့် ရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊မိသားစု ဆိုတဲ့ ၀န်ထုပ်ကြီးအတွက် အထက်အမိန့် ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘဲ
ဘုန်းကြီးကို လည်း စည်းထားတဲ့ သင်္ကန်းကို မမြင်နိုင်အောင် အမိုက်တွေကဖုံး…လို့ ဘုန်းကြီး တုလို့ ဆိုလိုဆို…။
အမေ အရွယ်ကိုလည်း အမေ ဆိုတာ မသိတော့ အမေက မွေးတာမဟုတ်ဘဲ ဥကဘဲ ပေါက်သလို စုံလုံးကန်းလို့ တွန်းလိုတွန်း၊ရိုက်လိုရိုက်…နဲ့။
နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ မြတ်ဘုရားရှင်နဲ့ မတွေ့ပါဘဲ။ အပျက်ပျက်နဲ့ ကစဉ်ကလျား ထွက်ပြေးရပေ ပပေါ့။
ခေတ်ကြီးကို က ပျက်ခေတ်…
ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေ လည်း ချုပ်ငြိမ်းစေချင်ပါတယ်……….။
ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာလ တွေလည်း မြတ်ဘုရားနဲ့အမြန်တွေ့စေချင်ပါတယ်…။
ကမ္ဘာမြေကြီး ငြိမ်းချမ်း သာယာလှပအောင် မြတ်ဘုရား အရိမေတ္တရ ကို အမြန်ပွင့်စေချင်တော့တာပါဘဲလေ။
ဇတ်တူသားတွေ စားကြတဲ့ ဓလေ့ မြန်ပြည်မှာ ဆက်ပြီ မကြီးထွားစေချင်တော့တာ အမှန်ပါ။
← မြူမှောင်ဝေကင်း နိုင်ငံသို့ …
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၁၁) – Aung Din →
သန်းဝင်းလှိုင် – သမိုင်းတကွေ့မှ အာဠာဝက သခင်ဖိုးလှကြီး
May 2, 2014 May 2, 2014 Aung Htet
October 9, 2016 Aung Htet
One thought on “ခေတ်သစ် အင်္ဂုလိမာ (သုို့) မြန်မာ့ရဲ”
ဒီးဒိုး ရယ် ခေတ်သစ်အင်္ဂုလိမာလ ဆိုတာ ပြည်သူ့ ရဲတွေထဲမှာသာ ရှိတာမဟုတ်ပါ၊ မောင်ပျာလောင် မတက်ဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေထဲမှာလည်း ခေတ်သစ် ဒိတ္ထိ တက္ကဒွန်း ဆရာကြီးတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ၀ိုင်းမှာပြောနေကြပါတယ်။ အားလုံးမဟုတ်ပေမဲ့ တချို့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာကြီးတွေက ဒီကနေ့ ပြန်ရောက် မနက်ဖြန် မြန်မာ့ပညာရေးရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး အတွေ့ အကြုံတွေကို ပုံတူကူးချပြီး တပြည့်ဆရာငယ်တွေကို လက်ညှိုးလိုက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်၊ ရဲလည်း ဘာသားနဲ့ ထုထားတာကြောင့် တက္ကသီလာဆရာကြီးအမိန့် ကို မနာခံရမှာလည်း ? ? ? ။ အရင်အစိုးရလက်ထက်က အမေစုကို မတော်မတရားပြောဆိုကြပြီး နေရာယူ နိုင်ငံခြားသွား – ဟော အခုတော့၊ တမတ ကီး ချေတော်ရင်းက ပုရောဟိတ် ပုဏ်ဏားကီး (သူများကိုပုံချ ပြီး နားနေ) တဲ့ ပညာယှိကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ – ဒီးဒိုး သိရဲ့သားနဲ့ ရဲတွေကိုဘဲ အပစ်မတင်ပါနဲ့ ၊ ပုလိပ်တွေ ဆိုင်ခံနိုင်ပါသေးတယ် – – – မှ၊ ရဲ အောက်က စပယ်ရာ အစုတ်ပလုပ် ရယ်ပါ ခင်ဗျား ၊